Himalaya Dainik » क्रिकेटका ८ महिला एङ्करः जसका अघि ‘फिका’ लाग्छन् बलिउड नायिका (तस्बिरसहित)
बलिउड नायिकालाइ समेत माुथ खुवाउने उदघोषण गर्ने सुन्दरीको निकै चर्चा हुने गर्छ । क्रिकेटमा उदघोषण गरेर चर्चामा अाएका केहि सुन्दरीहरू-
पल्लवि शारदा :
उनि अभिनेत्रि संगै भारतनाट्यम कि डान्सर पनि हुन । अस्ट्रेलियामा भारतीय परिवारमा जन्मेकी पल्लविले बलिउड चलचचित्र माई नेम ईज खानमा अभिनय गरेकी छिन । उनले सन २०१६ को आईपिएलमा एङ्करिङको भुमिकामा प्रस्तुत भएकी थिईन । आईपिएलमा उनको चार्मिङ लुक्सले सबैको ध्यान आफ्नो तर्फ आर्कषित गरेकी थिईन ।
रोशेलले आईपिएलको छैठो सिजनमा एङ्करिङ गरेकी थिईन । रोशेलले सन २०१२ मा मिस ईन्डियाको उपाधि हातपार्दे चर्चित रियालटी शो बिगबसमा पनि सहभागिता जनाएकी छिन । सन २०१८ मा उनले प्रेमी किथ सिकेरासंग वैबाहिक सम्बन्ध गासेकी थिईन ।
करिश्मा कोटक :
ब्रिटीस अभिनेत्री करिश्मा एक सफल एङ्कर पनि हुन । उनले आईपिएलको छैठो सिजनमा एङ्करिङ गरेर चर्चामा आएकी थिईन । करिश्माले आफ्नो करियर मोडलिङ बाट सुरुवात गर्दै किङफिसरको क्यालेन्डरमा देखा परेकी थिईन ।
शिवानी दान्डेकर :
उनले अमेरिकन टेलिभिजनमा एङ्करको रुपमा आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी थिईन । शिवानीले धेरैजसो टिभी सिरीजहरुमा पनि एङ्करको रुपमा काम गरेकी छिन ।
नगरानीले सन २००६ मा च्याम्पियन ट्रफिको होस्ट गरेकी थिईन । उनी सन २००७, २००९ र २०१० को विश्वकपमा पनि थिईन । उनले टि २० का करिब ४ ईभेन्टहरु पनि होस्ट गरेकी छिन । सोनाली बलिउड चलचित्र रब ने बनादि जोडी, दिल बोले हडिप्पामा काम गरेकी छिन ।
अर्चानाले आईपिएलको चौंथो सिजनमा एङ्करिङ गरेकी थिईन । अर्चनाले ट्रवर डायरी फर एक्सट्रा कभर जस्ता क्रिकेट शो हरु होस्ट गरेकी छिन ।
भारतीय मुलकी ईङलिस क्रिकेटर ईसाले आईपिएलमा एङ्करिङ गरेकी छिन । ईङल्यान्डले सन २००९ मा महिला क्रिकेट विश्वकप जित्दा टिमका प्रमुख सदस्य थिईन ।
थप समाचार- स्वस्तिमालाई फ्यानले सोध- ‘निश्चलसँग पैसाका लागि बिहे गर्नुभएको हो ?’
छोटो समयमा नै निकै चर्चामा अाएकी नायिका हुन् स्वस्तिमा खड्का । उनले आफ्ना फ्यानको जवाफ दिने क्रममा उनले केही अनपेक्षित प्रश्नको जवाफ दिनुपरेको छ ।
एक फ्यानले उनलाई सोधे–‘के तपाईले निश्चलसँग पैसाका लागि बिहे गर्नुभएको हो ? किन अहिलेसम्म तपाईहरुले बच्चाको बिषयमा नसोच्नुभएको ?
यो प्रश्नको जवाफमा नायिका स्वस्तिमा खड्काले लेखेकी छिन्–‘के पैसा कमाउन सजिलो छ र ? हामी किन मिहिनेतका साथ काम गरिरहेका छौ ? सजिलो जवाफ छ कि, कोहीसँग बिहे गर अनी पैसा कमाउ । बच्चाको बिषयमा अहिले कुनै आइडिया छैन ।’
साथै केही मानिसहरुले गर्ने आलो’चनाको बिषयमा के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनि लेख्छिन् –‘घृ’णा कुनै पनि मानिसको न*कारात्मक भावना, ड’र र अ*सुरक्षा व्यक्त गर्ने माध्यम हो ।’
नायिका स्वस्तिमा खड्का पछिल्लो समय भुटानी श*रणार्थिको बिषयमा बन्न लागेको एक अंगेजी चलचित्रमा काम गर्न लागेको खबर सार्वजनिक भएको छ तर यस बिषयमा उनले केहि खुलाएकी छैनन् ।